Muujinta isleeg ka 36 ilaa 36 Bogga 8 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2Al + 3Acao → Al2O3 + 3Ca
aluminium aluminium oksaydh calcium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) uga falcelisa CaO ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Ca (calcium)?
Isku qas aluminium iyo kaalshiyam oksaydh koob dhoobada ah. Kadib, kuleyli heerkulka saxda ah.
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay ka falcelisaa CaO ()
Heerkulka sarreeya, aluminiumku wuxuu yareeyaa oksaydh badan oo bir ah (gadaashiisa aluminium ee taxanaha falcelinta birta) birta bilaashka ah Dareen-celintaas waxaa loo yaqaan fal-celinta kuleylka ee aluminium. Maaddaama Ca ay ku taal Al hortiisa taxanaha falcelinta birta, falcelintan ma dhacdo.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3CaO → Al2O3 + 3Ca
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ca (kalsiyum)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ca ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ca (kalsiyum) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 36 ilaa 36 Page 8
Falcelinta Al (Nhôm) la falgal Cao (oxit canxi) soo saaro Al2O3 (Nhôm oxit)
Falcelinta soo saarta walaxda Ca (canxi) (kaalshiyam)
CaCl2 → Ca + Cl2 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca (AlO2)2 CaH2 → Ca + H2